Arbaco, Nov 25, 2020-Adhicadeeye oo markale dhaqdhaqaaq nabad raadin ka bilaabmayo iyo wasiiro ku soo qulqulaya – LaacibOnline
Adhicadeeye oo markale dhaqdhaqaaq nabad raadin ka bilaabmayo iyo wasiiro ku soo qulqulaya
Arbaco, November, 25, 2020 (HOL) – Waxaa magaalada Laascaanood soo gaadhey xubno wasiiro ah oo ka soo kicitimay magaalada Hargeysa iyadoo ay qaar kalena soo socdaan.
Wasiirada Xanaanada Xoolaha, Beeraha, Cadaaladda iyo Xidhiidhka Golayaasha, waxaana la sheegayaa in wasiirada Arimaha Gudaha iyo Warfaafinta la filayo in ay dhowaan soo gaadhaan si loo guda galo halsha ay u socdaan oo ah xal u helida colaad laba beelood ku dhexmartay Adhicadeeye oo 30Km. waqooyi kaga quman Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Magaalada Adhicadeeye oo dhowaan lagu soo gabagbeeyey shir nabadayn ah oo laba bilood ka soconayey kaas oo ahaa kii ugu balaadhnaa ee ka dhaca iyadoo ay gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle ay ergooyinku ka yimaadeen guulna ay ka gaadheen.
Waxaase si aad ah laysu weydiinayey sababta loo eeganayo colaada Adhicadeeye dhexdeeda ka taagan in kasta oo Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo ahaa matoorka shirkaas hore guusha ka gaadhey uu dhawrjeer xusay in iyana la dhamayn doono balse maanta ayaa loo soo dhiila dhaansaday in kasta oo ay tahay colaad guun ah oo soo noqnoqtay.
← Arbaco, Nov 25, 2020-Siyaasi Cabdi Cabdulaahi Xaashi oo Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan Xilka Madaxweynaha
Diego Maradona oo geeriyooday →
Talaado, July 14, 2020-Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta u safraya Dhuusamareeb
Arbaco, Sept 2 , 2020-Qaramada Midoobay oo kulan heer sare ah u qabanaysa madaxda dowlad federalka iyo dowlad goboleedyada
Talaado, Sept 1 , 2020-Deni iyo Axmed Madoobe oo loo xiray waddooyinka Muqdisho